NLD ပညာရေး ကွန်ယက်မှ ရွှေ့ပြောင်းကျောင်းများသို့ ငွေကြေးများ လာရောက် လှူဒါန်း	Posted on January 30, 2013	by bmta05 ပညာရေးရန်ပုံငွေအဖြစ် အလှူခံ ရရှိထားသော ငွေကြေးများထဲမှ ကျပ်ငွေ ၁၂၈ သိန်းကျော်ကို ထိုင်းနိုင်ငံ တာ့ခ် ခရိုင်တွင်းရှိ ရွှေ့ပြောင်းကျောင်း အချို့ကို NLD ပညာရေး ကွန်ယက်မှ တာဝန်ရှိသူများက မြဝတီမြို့၊ မြဝတီ ဟော်တယ်တွင် ယခုလ ၂၇ ရက်နေ့က အခမ်းအနားဖြင့် လာရောက်လှူဒါန်း ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။
This entry was posted in သတင်း, Burmese pages only. Bookmark the permalink.	← NLD Donates to Migrant Schools in Thailand